Modely amin'ny famoronana fampisehoana ho an'ny Mac miaraka amin'ny iWork | Famoronana an-tserasera
Modely ho an'ny fampisehoana ataonao amin'ny Mac
Jose Angel | | dia midika hoe, Templates
Na dia toa sangisangy aza izany, eny ho an'ny Mac. Ity interface ity dia mety ho somary misafotofoto ihany fa ny zavatra lehibe momba ity rindranasa ity dia ny ahafahantsika manindry hanokatra ny endriny tsirairay amin'ilay Efitra birao na koa miaraka Miasa aho.
Rehefa te-hanolotra sanganasa iray isika dia sarotra foana ny manomboka mamolavola endrika lahatsoratra izay toa matihanina tokoa. Izany no antony itondrako anao ity fitaovana ity: Modely ho an'ny MS Office.
Ity eo amin'ny hafa dia fitaovana mahasoa izay hanome anao endrika maro sy endrika samihafa hamahana ilay fisalasalana mamorona izay ananantsika rehetra tany am-piandohana. Mba hanaovana izany dia mila mandeha any amin'ny App Store fotsiny ianao ary manorata ao amin'ny motera fikarohana ny anaran'ny fampiharana (Amin'ny Mac). Na mivantana amin'ity rohy ity: Modely ho an'ny MS Office
Raha vao sintonina ianao dia hanana modely tsy manam-petra amin'ny asanao. Mazava ho azy, ny voka-dratsin'ity fampiharana ity dia izay maro amin'izy ireo no karama, fa misy vakizoro manangona ireo maimaimpoana rehetra, ary tonga ilay zavatra mahaliana ho an'ny "paosy kely".
Ny fampiharana dia azo ampiasaina amin'ny pejy roa, Keynote ary Nomery. Misy modely ho an'ireo rindranasa rehetra ireo amin'ny vidiny eo anelanelan'ny € 0 sy € 1,99. Na dia afaka misafidy ny hividy ilay fangatahana tanteraka amin'ny € 39,99 sy hahazo ny rehetra ianao modely mandrakizay.
Tsy misy maodely ihany, fa misy koa ny logo, endrika ary sary azo ampiasaina amin'ny fampisehoana. Azonao atao ny mamorona ny tenanao hahazoana a maodely tokana.
Ny zavatra tsara momba ity fampiharana ity dia azy mode an-tserasera, noho izany, indraindray dia havaozina sy ampidirina ao modely vaovao ho fampiasanao. Ilaina ity hanavao ny asanao ary hanavao hatrany.
Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa maro hafa natokana ho azy isika, maimaimpoana ampiasaina ary aloa. Fa ho ahy dia ity no feno indrindra nananako. Tsy mampino ireo volavola ary hisy asa matihanina izay tena ilaina amin'ny fampisehoana nataonao.
Mahafantatra zavatra hafa azonao atolotra anay ve ianao? Manorata hevitra ary mizara fitaovana izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Modely ho an'ny fampisehoana ataonao amin'ny Mac
Sketch 4.1 dia mitondra interface misy nohavaozina amin'ity rindrambaiko famolavolana nomerika ity
Mpanakanto Brandon Land, Designer ary Illustrator